Mailjet mandefa fitsapana A / X miaraka amin'ny 10 Version | Martech Zone
Tsy toy ny fisedrana A / B nentim-paharazana, Mailjet ny Ny fitsapana A / x dia ahafahan'ny mpampiasa mampitaha amin'ny endriny 10 ny mailaka andrana samihafa alefa mifototra amin'ny fifangaroana hatramin'ny efatra lehibe: Tsipika lohahevitra momba ny mailaka, Anaran'ny mpandefa, Mamaly ny anarana, ary ny atiny mailaka. Io fampiasa io dia ahafahan'ny orinasa mizaha toetra ny fahombiazan'ny mailaka alohan'ny handefasana azy any amin'ny vondrona mpandray betsaka kokoa, ary manolotra fahitana azon'ny mpanjifa ampiasaina mba hisafidianana an-tanana an-tanana na mandeha ho azy ny kinova mailaka mahomby indrindra handefasana ireo mpandray sisa amin'ny lisitra kendreny.
Ny fampitahana ny fampielezan-kevitra amin'ny fampielezan-kevitra Mailjet dia manome ny mpanjifa hery hanaraha-maso ny fampielezan-kevitra hatramin'ny 10 teo aloha, mba hahafahan'ny mpampiasa mamaritra ny valin'ny fampielezan-kevitra haingana kokoa noho ny teo aloha ary mora ny miditra amin'ny fampielezan-kevitra mahomby indrindra isan-kerinandro, volana na taona.
Famintinana sy fandefasana andrana A / X
Vokatra fitsapana A / X amin'ny fotoana tena izy
Vokatra fitsapana fampitahana A / X
Ny fitaovana fanangonana ny lampihazo dia ahafahan'ny mpampiasa manangona fanentanana mitovy amin'izany, toy ny hafatra amidy isam-bolana na taratasim-baovao isan-kerinandro, ary mahazo fomba fijery lalina momba ny mailaka voaomana na bisikileta matetika. Miara-miasa amin'ireo endri-javatra ireo, ny mpanjifa dia hanana ny fampahalalana rehetra ilainy mba handraisana fanapahan-kevitra mailaka indrindra amin'ny orinasan'izy ireo, toy ny fotoana tsara indrindra amin'ny taona handaminana fanambarana lehibe na drafitra ny fivarotana lehibe manaraka.
Ankoatry ny fampitahana endri-javatra, Mailjet koa dia manohana fizarana (mamela ny mpampiasa handefa kinova mailaka isan-karazany amin'ny fifandraisana isan-karazany), ny personalization (mampifanaraka ny mailaka isaky ny fifandraisana manokana), ary nanampy API fanavaozana ny fampidirana amin'ireo rafitra fitantanana atiny, fampiharana, tranokala ary CRM.
Tags: ab testingfitsapana famakyVotoatin'ny mailakalohahevitra mailakatsipika momba ny mailakafitsapana mailakamailjetpersonalizationmamaly an'ivalio ny anaranysegmentationmandefaanaran'ny mpandefafoto-kevitraandalana foto-kevitra
ExactTarget Marketing Cloud dia manangana ny Social Studio